Ganacsato ku banaanbaxeysa magaalada Muqdisho – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAGanacsato ku banaanbaxeysa magaalada Muqdisho
September 30, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Ganacsato ku banaanbaxeysa magaalada Muqdisho
Ganacsatada ku ganacsan jirtay suuqa kalluunka degmada C/casiis ee gobolka Banaadir ayaa maanta waxa ay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho ka dhigayaan banaanbax cabasho ah.
Banaanbaxan ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii ganacsatadan loo diiday inay ku ganacsadaan suuqaasi, islamarkaana lagu wareejiyay ganacsato gaar ah oo sida la sheegay halkaasi ka dhisanaya Hotel.
Dadka banaanbaxa dhigaya oo ku qeylinaya ereyo ka dhan ah dowladda ayaa waxa ay isugu soo baxeen wadada isku xirta Liido ilaa Taalada Daljirka Daahsoon, waxayna gaadiidka iyo mootooyinka u diidayaan inay maraan wadadaasi.
Dadkan ayaa kuu sheegaya in aysan heysan meel ay ku ganacsadaan marba hadii laga xiray suuqa, islamarkaana ay dowladda federaalka Soomaaliya ka sugayaan inay arrintan ka hadasho.
514,344 total views, 1,032 views today
514,344 total views, 1,032 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
514,242 total views, 1,032 views today
514,242 total views, 1,032 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
514,267 total views, 1,032 views today
514,267 total views, 1,032 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
514,320 total views, 1,032 views today
514,320 total views, 1,032 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
514,389 total views, 1,032 views today
514,389 total views, 1,032 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]